Informations – Online BBC
Jun132018 by OnlineBBCNo Comments
फेसबुक विश्वकै नम्बर एक सामाजिक सञ्जाल हो।यसमा करिब १.३ विलियन प्रयोगकर्ताहरु विश्वभरबाट जोडिएका छन्। प्राय यसका प्रयोगकर्ताहरुले दिनमा एक पटक फेसबुक खोलेकै हुन्छन्। त्यसैले आफ्नो व्यापार व्यसाय र उत्पादनको बारेमा विश्वलाई जानकारी दिन फेसबुक सजिलो माध्यम बनेको छ। साना होस् वा ठूला सबै खाले व्यवसायहरुले आजभोलि फेसबुकमा आफ्ना उत्पादनको विज्ञापन गरि प्रचार प्रसार गरिरहेका हुन्छन्। फेसबुकमा तपाईँ हामीले लाइक नगेरको पेजबाट स्पोन्सर भनेर देखिने पोस्टहरू नै विज्ञापन हुन्। जुन फेसबुकलाई पैसा तिरेपछि मात्र त्यसरी देखिन्छन्। यहीनै फेसबुकको मुख्य आम्दानीको श्रोत हो। फेसबुकले सिधै दिनभरमा यति घण्टा फेसबुक चलाएको भनेर पैसा बाँड्दैन। यदी तपाईँ फेसबुकको अडियन्स नेटवर्कमा सहकभागी भई काम गर्नुहुन्छ भने सिधै फेसबुकलेनै यसका विज्ञापनदाताबाट आएको पैसाको केही प्रतिशत पैसा दिन्छ। कसरी सहभागि हुने फ
Jun112018 by OnlineBBCNo Comments
काठमाडौं, २७ जेठ – बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न ल्याउने मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालय र सम्बद्ध निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिइरहेका स्रोतले बताएको छ । राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रालयको चाहनाअनुसार नै ठूला संस्था मर्जरको तयारी हुँदैछ । असार १० गतेभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतकाअनुसार, अघिल्लो मौद्रिक नीतिले दिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको समयसीमा आगामी असार मसान्तमा सकिन लाग्दा पूर्ण नभइसकेकाले त्यसलाई पन
Jun92018 by OnlineBBCNo Comments
प्राचिन समयमा जीवन भएको अनुमान मंगलग्रहमा…..!!
काठमाडौं- नासाको एक रोभरले मंगलग्रहका चट्टानहरुमा भेटिएका अवशेसहरुलाई हेरेर त्यहाँ प्राचिन कालमा जीवहरु रहेको अनुमान गरेको छ। रोभरले तीन अर्ब बर्ष पहिले देखि चट्टानहरुमा कार्बनका अणुहरु, वायुमण्डलमा मिथेन र मौसम परिवर्तनको संकेतहरु पनि फेला परेको छ। डाटाले गेल क्रेटर भित्र रहेको पानीको झ्यालहरू, रासायनिक भवन ब्लक र ऊर्जा स्रोतहरू सहित जीवनको लागि आवश्यक सबै अवयवहरू अर्बौ बर्ष पहिले रहेको पनि तथ्य फेला पारेको छ। कार्बनिक अणुले कार्बन र हाइड्रोजन समावेश गर्दछ, र यसमा अक्सीजन, नाइट्रोजन र अन्य तत्वहरू समावेश हुन सक्छन। सामान्यतया जीवनसंग सम्बन्धित, जैविक अणुहरू पनि गैर जैविक प्रक्रियाहरु द्वारा निर्माण गर्न सकिन्छ तर ति जीवन संकेत नहुन पनि सक्छन। "यी नयाँ निष्कर्षहरु संगै मंगल ग्रहले हामीलाई नयाँ प्रमाण खोजि रहन उर्जा दिइरहेको छ" नासा मुख्यालयमा प्रशासक थॉमस जर्बुबुननले भने, "मलाई विश
Jun82018 by OnlineBBCNo Comments
गर्मी मौसममा यस्ता फेस प्याक लगाए अनुहारमा निखार आउने
गर्मी मौसममा छालालाई अतिरिक्त हेरचाहको आवश्यकता पर्दछ । गर्मीमा छालालाई हेल्दी डोज दिन निम्न फेस प्याक प्रयोग गर्न सकिन्छ । काँक्राको फेस प्याक म्याङ्गो फेस प्याक दही फेस प्याक चन्दन फेस प्याक वाटरमेलन फेस प्याक कागती फेस प्याक गर्मी मौसममा छालालाई अतिरिक्त हेरचाहको आवश्यकता पर्दछ । गर्मीमा छालालाई हेल्दी डोज दिन निम्न फेस प्याक प्रयोग गर्न सकिन्छ । काँक्राको फेस प्याक म्याङ्गो फेस प्याक दही फेस प्याक चन्दन फेस प्याक वाटरमेलन फेस प्याक कागती फेस प्याक गर्मी मौसममा छालालाई अतिरिक्त हेरचाहको आवश्यकता पर्दछ । गर्मीमा छालालाई हेल्दी डोज दिन निम्न फेस प्याक प्रयोग गर्न सकिन्छ । काँक्राको फेस प्याक म्याङ्गो फेस प्याक दही फेस प्याक चन्दन फेस प्याक वाटरमेलन फेस प्याक कागती फेस प्याक त्यो दिन सेना समायोजन नभएको भए, जे पनि हुन्थ्यो …. क
काठमाडौ, बैशाख ९ । अहिलेको प्रदूषणले भरिएको वातावरणले गर्दा छाला चाँडै सुख्खा, बेजान र निस्तेज हुन्छ । छालाको गुमेको चमक फर्काउन र छालासित जोडिएको हरेक प्रकारको समस्या समाधान गर्न फलफूलको प्रयोग अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ । मेवा, स्याउ एप्रिकेट, स्ट्रबेरी आदि फलफूल छालालाई नरमपन प्रदान गर्न, रिंकल र दाग–धब्बा हटाउन, छालालाई भित्रबाटै पोषण प्रदान गर्न, रोमछिद्रमा फसेको मैलो सफा गर्न, छालाको लचिलोपन कायम राख्न तथा छालालाई चम्किलो एवं सुन्दर राख्न विशेष सहयोगी हुन्छन् । स्याउ : स्याउमा भएको एन्टिअक्सिडेन्ट्सले कोषिकालाई नष्ट हुनबाट जोगाउँछ र उमेरको प्रभाव छालामा पर्न दिँदैन । त्यसबाहेक स्याउमा छालालाई नरम, कोमल एवं लचिलो बनाउने विशेष गुण पनि पाइन्छ । एप्रिकेट : एप्रिकेटमा लिनालिक र ओलिक एसिड, भिटामिन ए, सी तथा लाइकोपिन हुन्छ । यी सबै तत्वको मेलका कारण एप्रिकेट छालाको सौन्दर्य बढाउन अत
एजेन्सी । अनुहारको सुन्दरताका लागि छाला सफा र सुन्दर हुन धेरै जरुरि छ । यसको लागि धेरै असरदार टिप्सहरु अपनाऊन सकिन्छ, जसले अनुहार सफा र स्वस्थ बनाई गुमेको सुन्दरता पनि फिर्ता पाउन सकिन्छ । स्वस्थ मुहारका लागि खानपान र उचित देखभालको आवश्यकता पर्दछ । मौसममा बदलाव, प्रदूषण र मानसिक तनावको कारण तपाईको मुहार स्वस्थ्य र आकर्षक बनाइ राख्नका लागि केहि यस्ता उपाय अपनाउन सक्नु हुन्छ : – नियमित सरसफाई – मुहारलाई सधै नरम बनाई राख्नु – भीटामिन डीको प्रयोग नियमित रूपमा मुहारको हेरचाहका लागि उक्त नियमका पालना गर्न सकियो भने मुहारमा हराएको चमक पनि फिर्ता हुन सक्छ ।एजेन्सी । अनुहारको सुन्दरताका लागि छाला सफा र सुन्दर हुन धेरै जरुरि छ । यसको लागि धेरै असरदार टिप्सहरु अपनाऊन सकिन्छ, जसले अनुहार सफा र स्वस्थ बनाई गुमेको सुन्दरता पनि फिर्ता पाउन सकिन्छ । स्वस्थ मुहारका लागि खानपान र उचित
चिनियाँ युवतीहरुको सुन्दरतामा लुकेको वास्तविकता,..
चिनियाँ युवतीहरु आफ्नो चम्किलो, बेदाग अनि छालाको लागि चिनिन्छन् । वास्तवमा यस्तो छालाको पछाडी लुकेको हुन्छ उनीहरुको घरेलु तथा परम्परागत तरिका र यस्ता तरिका हामिहरुले अपनायौं भने धेरै फाईदा हुन सक्छ । १. नियमित रुपमा ग्रीन टि सेवन गर्नै २. पुदिनाको पात पिसेर अनुहारमा लेप लागाउँने ३. अण्डाको सेतो भाग अन’हारमा लगाउने र २० मिनेट पछि धुने जस्ले गर्दा अनुहारको चाउरी पना हट्ने छ ।चिनियाँ युवतीहरु आफ्नो चम्किलो, बेदाग अनि छालाको लागि चिनिन्छन् । वास्तवमा यस्तो छालाको पछाडी लुकेको हुन्छ उनीहरुको घरेलु तथा परम्परागत तरिका र यस्ता तरिका हामिहरुले अपनायौं भने धेरै फाईदा हुन सक्छ । १. नियमित रुपमा ग्रीन टि सेवन गर्नै २. पुदिनाको पात पिसेर अनुहारमा लेप लागाउँने ३. अण्डाको सेतो भाग अन’हारमा लगाउने र २० मिनेट पछि धुने जस्ले गर्दा अनुहारको चाउरी पना हट्ने छ ।
May252018 by OnlineBBCNo Comments
‘लामो छ कथा…’स्वाभिमान भन्दा चिया बेच्नु जाति’..!!!
‘नमस्कार सर’, स्कूले जीवनको ‘फष्ट ब्वाई’ दिनेश र मैले उहाँलाई अभिवादनको गुरुदक्षिणा टक्र्यायौं। उहाँ बेफुर्सदी देखिनुहुन्थ्यो। उहाँको हातमा लामो काठे झिर थियो। अँगेनामाथिको कराईमा दुनोट र चप पाक्दै थियो। बालक, बृद्ध उमेरका ग्राहक दुनोट र आलु चप खान उहाँको घेरा हालेर बसेका थिए। नजिकै अर्काे सानो अँगेनो पनि थियो, जहाँ चिया उम्लँदै थियो। मास्टरी जीवनबाट अवकास लिएपछि प्यासी सरले नास्तापसल सुरु गर्नुभएको रहेछ। उहाँको नास्तापसलको ‘मेन आइटम’ चिया, दुनोट, आलुचप र चिउरा-तरकारी रहेछन्। हामी पुग्दा तेलमा पाक्दै गरेको दुनोट र आलुचप काठे झिरले वल्टाईपल्टाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। पाकेर रातो भएका दुनोटलाई पत्रिकामा बेरेर ग्राहकलाई दिन उहाँलाई भ्याइनभ्याई थियो। ब्यस्त हुनुहुन्थ्यो, तर व्यस्तताका बीच हाम्रो नमस्कार फर्काउन कुनै कञ्जुस्याइँ गर्नु भएन। हाम्रो नमस्कार फर्काउँदा उहाँको देब्रे हातको झिर
May212018 by OnlineBBCNo Comments
आखिर कसरि बिलिन भईन समुन्द्रमै न्अमेरिका हिडेकी सुमित्रा..???
विशाल समुद्रमा पानीजहाज चढेर विभिन्न देशका यात्रु गन्तव्यतिर बढिरहेका हुन्छन् । जहाजभित्र एकाध दिनलाई पुग्ने पानी र खाद्यान्न छ, तर केही घण्टामा गन्तव्यमा पुग्ने भनिएको जहाजले बाटो बिराउँछ । जहाज विशाल समुद्रमा कैयौं दिन हराइरहन्छ । प्रोडक्सन म्यानेजरको हैसियतमा चार्ल्स इलेस्टोले हस्ताक्षर गरेको पत्र । पत्रमा ५ नेपाली कलाकारलाई छायांकनका निम्ति हैटी बोलाइएको उल्लेख छ । खानेकुरा सकिएर यात्रु हैरान हुन्छन् । यत्तिकैमा खान नपाएर छटपटिइरहेकी एक युवतीको मृत्यु हुन्छ । जहाजका अन्य यात्रुले लास गन्हाउँछ भनेर ती युवतीको शव समुद्रमै फालिदिन्छन् । सोच्नुहोला, यो कुनै अंग्रेजी चलचित्रको कारुणिक दृश्य–कथा हो । यथार्थ त्यस्तो होइन । यो त्यही सत्य घटना हो, जसमा तीन नेपाली युवतीसमेत प्रत्यक्ष साक्षी थिए । केही महिनाअघि हैटीको राजधानी पोर्ट औं प्रिन्सबाट छुटेको पानीजहाज ‘क्यारेबियन सी’ मा १
May202018 by OnlineBBCNo Comments
फेसबुक धेरै चलाउनुहन्छ? मानसिक रोगी हुनु होला!विचार गर्नुहोस..
यसो एक छिन एउटा साथीसँग कुरा गर्छु भनेर म्यासेन्जर खोलेको थिएँ। अर्को तिर एउटा म्यासेज आयो। इनबक्स खोलेँ। १ सय १२ बाह्र जनाको ग्रुप रहेछ त्यो। मेरो साथीको नामबाट एउटा भिडियो आएको रहेछ मैले लिंकमा क्लिक नगरेरै थाहा पाएँ। त्यो भिडियो अश्लिल हो उत्तिखेरै अरु साथीहरुले पनि त्यसमा आपत्ति पोख्न थाले बास्तवमा कसले बनायो त्यो ग्रुप र कसले पठायो त्यो भिडियो कसैले पत्तो पाएनौँ। अन्तमा स्टाटसबाट नै त्यसमा हामी कसैको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्‍यौं। मलाई त्यो कुराले धेरै गम्भीर बनायो। बिहान महामृत्युञ्जय मन्त्र सुन्ने बानी छ मेरो। कहिलेकाहीँ खै किन हो युटुब खोल्न भनेर कम्प्युटरको पर्दा उघार्छु तर माउस फेसबुकमा गएर क्लिक हुन्छ। कलेज पढाउने मान्छे म। अनि आफै पनि फुर्सदको समय प्रायः पुस्तकहरु पढेरै बित्छ। काम र पढाईबाट फुर्सद मिलेको समय धेरै फेसबुकमै पनि बिताएको छु मैले। त्यो समयमा फेसब